Filipina: Fanavakavahana mihatra amin’ireo Filipiana any amin’ny Tobim-pitsaboan’i Baltimore · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2010 4:31 GMT
Mpiasa Filipiana efatra ao am in'ny Bon Secours Baltimore Health System any an-tanànan'i Baltimore no voaroaka tamin'ny asany tsy ela akory izay, noho ny fampiasàna ny teny Filipiana nandritra ny ora fisakafoanana. Mizara ny heviny momba io olana io ireo mpitoraka blaogy.
I angry asian man dia mino fa tsy rariny ny lalànan'ny hopitaly amin'ny fampiasàna tokana ny teny Anglisy.
Adarna's Attic dia mandray ny famintinana ny fehintenin'ireo mpiasa Filipiana efatra ho fandikàna ireo Lalàna momba ny Zon'ny Olom-pirenena tamin'ny 1964, “lalàna federaly Amerikana izay miaro ny isam-batan'olona amin'ny fanavakavahana mifototra amin'ny volon-koditra, fiaviana na fari-piainana sosialy.”
Ny Blog of Life an'i Jose Manuel dia manambara fa ny fandroahana dia “natao nandritra ny fotoana” lazaina ho tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy.'”
Mandritra izany, i Sarah Katrina Maramag dia maka fomba fijery mora takarina amin'ny tranga mahazo ireo mpitsabo mpanampy Filipiana any ampitan-dranomasina ary mampifandray izany amin'ny tsy fitsaharanan'ny fifindra-monin'ireo manam-pahaizana Filipiana miala ao Filipina.